Kalsiyamka Zinc Dejiye, Xasiliyaha Xarunta, Saameynta Wax ka beddelka- Hualongyicheng
Baadhitaankeena Waxyaabaha Ugu Muhiimsan
Hualongyicheng wuxuu ku siinayaa wax kasta oo aad ugu baahan tahay habka wax soo saarka oo aamin ah oo hufan.
Dhuumaha Biyo-bixinta ee PVC
Wixii rakiban PVC
Dejiye loogu talagalay Waxyaabaha PVC ee adag ee cad
Polyetylenka loo yaqaan 'Chlorinated Polyethylene' (CPE)
Gargaarka Guud ee Hawlaha Guud ee PVC
Waxaan nahay xulashada ugu fiican adiga
Iibinta ka dib
At Hualongyicheng Teknolojiyada Waxyaabaha Cusub, dadkeenna waxaa wata Kudayaal Tayo Sare leh, Adeeg Macaamiil oo Caymis ah, Hal-abuurnimo iyo Kalsooni. Kaliya dooni meyno macaamiisha inay iibsadaan alaabtayada; waxaan sidoo kale dooneynaa inaan ka caawinno inay ka helaan qiimaha ugu badan badeecadaha.
Xarunta dhexe ee Guangdong, Shiinaha, Hualongyicheng waxaa ka shaqeeya in ka badan 100 shaqaale ah oo adduunka ah iyo Warshad iyo R&D Center, oo baaxaddiisu dhan tahay 10,000 mitir murabac. Dhammaan waxyaabaha lagu daro waxay u hoggaansamaan heerka SGS iyo EN71 waxaana lagu aqoonsaday heerka caalamiga ah ee laga aqoonsan yahay deegaanka ee loo yaqaan 'ISO14001': 2004.
Xarumaheena Adeegyada-iibinta Kadib waxay ku yaalliin Vietnam, Myanmar, Thailand, Malaysia, Nigeria, iwm.
Jawaab celin togan oo ka timaadda macaamiisheennu waa mid ka mid ah xoogagga aan wadno
Tababbarka farsamada joogtada ah ee shaqaalahayagu wuxuu hubiyaa tayada wax soo saarka ugu fiican.
Khibrada wax soo saar ee ka timaadda qaybaha kala duwan ee alaabada PVC ayaa inaga sii horreysa qalooca.
Ku daridayada PVC ayaa loo dhoofiyay Yurub, Afrika, Koonfur-bari Aasiya, Bariga Dhexe, Waqooyiga Ameerika, Koonfurta Ameerika iyo wixii la mid ah.
Fiilo fiilooyinka PVC
WAA MAXAY DADKU TAHAY
Xu Weizhao Madaxweynaha Rifeng Enterprise Group
Hualongyicheng waa lamaane xirfadle ah. Wax soo saarkooda iyo adeegoodu waxay naga caawiyeen inaan soo saarno alaab tayo sare leh oo PVC ah waxaanna xallinnay dhibaatooyin badan oo la xiriira wax soo saarkeena Mahadsanid.
Zhu Liquan Madaxweyne kuxigeenka Weixing Group
Waa qeybiyaha alaabada ceyriin ee PVC waxaan ka soo xulnay boqolaal. Ilaa maalinti koowaad shaqo fiican ayey qabanayeen.
Ding Langyu Maamulaha Guud ee Dhuumaha Zhongcai
Adeegga Hualongyicheng wuxuu na siiyaa waa heerka ugu sarreeya. Iyagu waa aamin, kalsooni iyo hal-abuur. Kama waaban doono inaan kala shaqeeyo mashruucyada mustaqbalka.
Tan iyo markii la aasaasay, warshadeenu waxay soosaaraysay alaab heer caalami ah oo heer caalami ah iyadoo u hogaansameysa mabda'a tayada marka hore. Wax soo saarkayagu waxay heleen sumcad aad u wanaagsan oo ku saabsan warshadaha iyo kalsoonida ka dhexaysa macaamiisha cusub iyo kuwii hore ...
HLYC Waxay Iftiimineysaa Diiradeeda Joogtaynta sanadka 2020
HLYC waxay ku dhawaaqday Horumarka Guusha ee Dhismaha Xarunta Foormulada ee PVC